चीनको चिन्तामिश्रित प्रश्न : ‘नेकपा मिल्ने बिन्दु छैन ?’ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more चीनको चिन्तामिश्रित प्रश्न : ‘नेकपा मिल्ने बिन्दु छैन ?’
पुस १४ गते, २०७७ - ०८:४९
काठमाडौं । नेकपा दुई चिरा भएको अवस्थामा नेपाल आएको उत्तरी छिमेकी चीनको विशेष टोलीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति फुटेकामा चिन्ता लागेको आफ्ना राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश टोलीले हरेक भेटमा सुनाइरहेको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – राष्ट्रपतिदेखि नेकपाका नेतासामु टोलीको नम्र जिज्ञासा छ, ‘नेकपा किन फुट्यो ? यसको फेरि मिल्ने विन्दु छ कि छैन ? प्रतिनिधिसभा विघटन अब के हुन्छ ?’ टोलीले आइतबार र सोमबारसम्म विभाजित दलका प्रमुख नेतागणसँग भेटघाट भ्याइसकेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ नेतृत्वको विशेष टोलीले आइतबार पहिलो भेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरु गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीसामु येचौले माथिका ३ जिज्ञासा राखेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल लोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको र त्यही बाटोबाटै सबै समस्याको समाधान गर्ने जवाफ चिनियाँ टोलीलाई दिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘नेपाल लोकतान्त्रिक विधिबाटै अगाडि बढ्छ । हाम्रा आफ्नै नियम–कानुन छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको यो विषय अदालतमा छ । यसको निरुपण अदालतले लोकतान्त्रिक बाटोबाटै गर्छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलमा भनेकी थिइन् ।
नेपालमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै चिसोपना नआउने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । केपी शर्मा ओली ०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री भएका बखत चीनका तर्फबाट कुओ नै बधाई दिन नेपाल आएका थिए । त्यसवेला पनि उनको राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता भएको थियो ।
राष्ट्रपति सीको विशेष दूतका रूपमा कुओ नेतृत्वको टोली आएको हो । टोलीले आइतबार अपराह्नै बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेको थियो । नेकपाकै अर्काे पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग टोलीले सोमबार भेटवार्ता गरिसकेको छ ।
कुओ नेतृत्वको टोलीले कम बोल्ने, बढी सुन्ने गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । नेकपा विवाद मिलाउन भूमिका खेल्ने गरी यो टोली काठमाडौं उत्रेको आरोप लागिरहेका बेला टोलीले भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नभई आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन र आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसाथ भ्रमण भएको प्रस्टीकरण दिएको छ । टोलीले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि पनि दलहरूको बलियो आन्तरिक एकता कायम हुनुपर्ने सन्देश भेटका क्रममा राखेको छ ।
टोलीले नेता दाहालसँग सोमबार बिहान उनकै निवास खुमलटारमा भेटवार्ता ग¥यो । दाहालसँग नेकपा कुन विन्दुमा मिल्न सक्छ ? के कारणले यो अवस्था आयो ? भन्नेमा विज्ञासा राखेको दाहाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।
दाहालले भने जुन विन्दुमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिगार्ने काम गरे, त्यही विन्दुलाई सपार्ने काम गरे फेरि एकताको सम्भावना नटुटेको जवाफ दिएका थिए । ‘पार्टीमा अन्तरविरोध थिए । समस्या समाधान छलफलकै माध्यमबाट हुन्थे । तर, प्रधानमन्त्रीले जुन विन्दुबाट छलफल नै हुन नसक्ने वातावरण बनाउनु भयो, त्यही विन्दुमा उहाँ सच्चिन र त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अवस्था आए फेरि मिलेर जान सम्भव छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ,’ चिनियाँ टोलीसँगको छलफलका क्रममा दाहालले व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
‘नेकपा फुट्न हुँदैन । मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ’, राष्ट्रपति सीको सन्देश सुनाउँदै कुओ नेतृत्वको टोलीले दाहालसँग जिज्ञासा राख्दा दाहालले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर कलंक बोक्ने काम गरेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । दाहालपछि उक्त खेमाका अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि चिनियाँ टोलीले सोही जिज्ञासा राखेको थियो ।
नेपालले भने नेकपाभित्रको विवाद, ओलीको व्यवहार र पार्टी किन यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने विषयमा श्रृंखलामा टिपोट प्रस्तुत गरेको स्रोतले बतायाे । सबैजसो नेतासँगको भेटमा चिनियाँ विशेष टोलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूहरूको कुनै हस्तक्षेप नरहेको, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै चाहेको तर, नेकपाको विभाजनले आफूहरूलाई चिन्तित तुल्याएको बताएका थिए ।
पहिलो पटक नेपालका जनप्रतिनिधिमूलक सवै संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने गरी आएको यो टोलीले जसपा नेता भट्टराईसँग भने सन् २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पुग्ने सन्दर्भमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका प्रमुख पार्टीवीच आपसी सम्बन्ध र नेपाल चीन सम्बन्ध अझै राम्रो र समधुर बनाउन आफूहरू नेपाल आएको बताएका थिए ।
भेटपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार भेटका क्रममा उपमन्त्री गुओ यैचोले सन् २०१५ मा तिब्बत जाने क्रममा चेङदुमा भएको भेटको स्मरण गर्दै पुनः भेट्न पाउँदा खुसी भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । टोली सोमबार लैनचौरस्थित सभामुख अग्नि सापकोटाको निवासमा पुगेर भेट गरेपछि दूतावास फर्केको थियो । टोलीले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनालगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । बुधबार पनि टोलीको राजनीतिक भेटघाट जारी रहनेछ ।
पुस १४ गते, २०७७ - ०८:४९ मा प्रकाशित